Best Open n'Ọnụ Bag Placer, dịanyā & Nso (nnukwu ngwaahịa) Manufacturer and Supplier | AHO
Open n'Ọnụ Bag Placer, dịanyā & Nso (nnukwu ngwaahịa)
Ejiri GW SERIES sistemụ na-emeghe ọnụ maka akpa ihe na-enweghị ihe ọ bụla na-abanye n'ime akpa oghere maka ngwa n'etiti 5 na 50 n'arọ kwa akpa. Usoro ndị ahụ dị mma maka flakes na granulu si na nri, nri, nri nri, kemịkal na mineral.
GW-550 Automatic Granular Heavy Bag Packaging Machine unit bụ ihe kwesịrị ekwesị maka ihe onwunwe Granular, ihe nkwakọ ngwaahịa bụ akpa akwụkwọ, akpa Pee, akpa akpa, ụdị mbukota bụ 10-25kg, ọsọ ọsọ nwere ike iru 3-8bags / min. Ọdịdị dị elu, nhazi dị elu dabara maka ihe dị iche iche
Nkwakọ ngwaahịa 10-25kg, nwere ike 1000 akpa / h (dịka akpa dị iche iche, akụrụngwa)
O kwesịrị ekwesị maka akpa akwụkwọ, Pee akpa, kpara akpa. Akwụkwọ akpa & kpara akpa nwere ike adopts ịkwa akwa akara (DS-8C). Pee akpa adopts na-ekpo ọkụ akara (HS-22D). (Final mkpebi dị ka ndị ahịa chọrọ.)
Efu akpa etinye usoro achọpụtara site detector si abụọ-nkwenye. Ndochi usoro ịkwụsị na-akpaghị aka mgbe leakage pụtara ma ọ bụ enweghị akpa na-etinye.
Automatic akpa feeder mejupụtara kehoraizin 3 nkeji, onye ọ bụla unit nwere ike ịchekwa 100 akpa (Pee akpa), adabara nnukwu ọsọ mmepụta.
Full akpaka na-agba ọsọ.
Agbakwunyere etiti damper na auger hopper (nhọrọ), ikuku chute (nhọrọ), iji gbochie ngwaahịa ikwommiri, akwalite dedusting N'ihi.
Omume gas na-agwụ ike maka akpa na-enweghị nhịahụ bụ nhọrọ, iji kpochapụ ikuku fọdụrụ na ngwaahịa ahụ.
Ngwaọrụ Nchedo & Njikwa
Bag ụkọ detector-dị ka 2 nkeji na-enweghị akpa, mgbe ahụ na-egosi ìhè & uzu ịdọ aka ná ntị – ọ bụ oge ezitekwara akpa. Mgbe 3 nkeji onye ọ bụla akpa-igwe na-akwụsị na-akpaghị aka.
Nsogbu: akpa ọnụ oghere nchọpụta - akpa e chucked auger isi ọhụma, offload akpa, kwụsị dosing igwe site mgbaàmà. Mgbe edozi nsogbu a, regharịa usoro ndozi ahụ.
Stitch na-agbaji detector - mgbe igweoduakwa kpachie gbajiri, egosi ìhè on, uzu ụda, dum igwe kwụsịrị na-akpaghị aka.
Eriri ụkọ detector - na-egosi ọkụ mgbe ị na-akwa ụkọ eriri. Buzzer na-ada ụda - ọ bụ oge iji nye eriri eriri.
Akpa na-ekpo ọkụ akara igwe na-enweghị akpaka okpomọkụ njikwa ma ọ bụ kpo oku straipu gbajiri detector.
Ihe nkwakọ ngwaahịa prefabricated kpara akpa (lined na eyi / Pee film)
Ogo nke ime akpa (500-700mm) x (300-400mm) LXW
Atụ iche iche 5-15KG
Ihe nha ziri ezi G 10G
Oge nkwakọ ngwaahịa 10-15bags / min (ntakịrị mgbanwe dabere na ngwugwu ngwugwu, akpa akpa wdg)
Ọnọdụ ikuku dị -10 Celsius C ~ + 45 Celsius
Ike 220V 50HZ 3Kw
Oriri Ikuku 0,5 ~ 0.7MPa
Akụkụ mpụga 5860x2500x4140mm (L x W x H)
Ibu ibu 1600kg
Nke gara aga: Automatic granular Arọ Bag Packaging Machine
Osote: Automatic Granule Open n'Ọnụ Bagging Machine mbukota Line
Automatic Rice Open-ọnụ Bag mbukota Machine B ...
Automatic Nnu mbukota Machine Open-ọnụ Bag B ...